Bit By Bit - Introduction - 1.4.2 Simplicity pamusoro zvakaoma kunzwisisa
Complex tsvakurudzo haungatongogoni nechokwadi mumwe chinhu chinoshamisa. Kana hanya kuchinja pfungwa, ipapo tsvakurudzo yako inofanira kuva nyore.
tsvakurudzo Social ari digitaalinen zera runowanzotaurwa nezvarwo kunzwisisa, dzakadai chinoshamisira algorithms uye yakagozha kadambari. Izvi zvinosuwisa nokuti chinonyanya uchapupu magariro tsvakurudzo kazhinji nyore. Kuva akajeka, kutsvakurudza nyore hazvina kufanana pakutsvakurudza nyore. Kutaura zvazviri, kazhinji zvokuvapfuura kusika tsvakurudzo nyore.
The chikonzero chinonyanya kukosha vanosarudza tsvakurudzo nyore ndechokuti ndiyo chete nzira kusika tendeka, zvisingatarisirwi migumisiro. Somuenzaniso, fungidzira kuti dzamuchangobva vakaperekedza tsvakurudzo achiedza kusimba kunzwisisa nzira. Kana migumisiro venyu kunowirirana tichitya wako, ipapo iwe zvichida kudzigamuchira. Asi, kana migumisiro venyu zvakasiyana chii zvawaitarisira, une mbiri nzira: kubvuma zvisingatarisirwi migumisiro kana nechokwadi kunzwisisa nzira. kufungidzira wangu kuti iwe vanowanzoguma nechokwadi zvakaoma nzira. Izvi zvine musoro akakwana, asi zvinoreva kuti zvikuru kunzwisisa nzira, kashoma kuti pave chisingatarisirwi nemigumisiro kuti uchava vanotofunga. Pane imwe nguva, nzira inogona kuva nerongo zvokuti chete nemigumisiro kuti unogona kutenda vaya kuti zvienderane imi zvavaitarisira. Panguva iyoyo, kutsvakurudza chakarasikirwa chinhu chinokosha zvikuru: tsvakurudzo vanofanira kukwanisa kushandura pfungwa dzako.
Dambudziko kuti ndava chete kurondedzerwa chinombofadza zvikuru kamwe ukatanga kuedza kuchinja womumwe pfungwa. Fungidzira nechinopiwa chinopa kunzwisisa chidimbu kutsvakurudza ine chisingatarisirwi mugumisiro mumwe munhu. Kuti mumwe munhu haana akapedza mwedzi kunyora bumbiro yako uye kushanda kuburikidza nemashoko ako saka pavanenge watarisana nesarudzo kubvuma tisingatarisiri mugumisiro kana chokwadi kunzwisisa nzira, ivo vanenge kuenda nechokwadi zvakaoma nzira. Kana hanya hunogutsa mumwe munhu kuti achinje pfungwa dzavo, ipapo tsvakurudzo yako anofanira kuva nyore.
Simple tsvakurudzo rinobva dzinongoitika zvakakodzera pakati mubvunzo uye mashoko; mune mamwe manzwi, akanaka tsvakurudzo magadzirirwo. Zvisinei, murombo tsvakurudzo magadzirirwo, inotungamirira kune yakanyangara zvakaoma kunzwisisa kunobva mutandavadze mashoko enyu mubvunzo izvo havasi yakanyatsokodzera. Bhuku rino chinotarisa nzira mbiri kuumba dzinongoitika zvakakodzera pakati mubvunzo uye mashoko. Chokutanga, bhuku rino kuchakubatsira kubvunza chaizvoizvo mibvunzo mashoko enyu. Chechipiri, bhuku rino richakubatsira vanounganidza mashoko zvakarurama kupindura mubvunzo wenyu.